Sarimihetsika · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Sarimihetsika · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Sarimihetsika tamin'ny Mey, 2017
Egypta: Nisy Vidiny Ihany Ny Tolon'ny Mpanatontosa Sarimihetsika
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana26 Mey 2017
Afaka hijery ny sarimihetsik'i Ibrahim El Batout Ein Shams [Ar] (Mason'ny Masoandro) ho toy ny sarimihetsika Egyptiana ihany ny farany ireo mpijery sarimihetsika Egyptiana amin'ny faran'ity volana ity taorian'ny tantaran'ny sivana.lava. Mitondra ho antsika ny tantara i Nermeen Edrees.
Open Video: Fifampiresahana Wireside Maneran-tany Miaraka Amin'i Lawrence Lessig
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana25 Mey 2017
Ahoana ny fisera amin'ny antonony, ahoana ny ampifanarahana ny fizakàmanana amin'ny vanim-potoana nomerika, ary ahoana ny ampivelarana malalaka ny fanehoan-kevitra, ny fampianarana, ny fampifangaroana sy ny fikarohana amin'ny lahatsary?
Manana Mpandresy Ny Fifaninanana Lahatsary An-tserasera Momba Ny Mpanjifa Tompon'andraikitra
Amerika Latina25 Mey 2017
Lahatsary Kolombiana fohy no voafidy ho mpandresy tamin'ireo tafakatra famaranana iraisam-pirenena miisa 10 tamin'ny fifaninanana horonantsary fohy an-tserasera iraisam-pirenena faha-4 amin'ny Kolontsain'ny Mpanjifa Tompon'andraikitra. Hoan'ny mpifaninana amin'ny teny Espaniola mpamokatra horonantsary fohy avy ao Espaina sy Amerika Latina ny fifaninanana izay karakarain'ny ECODES sy ny Fitantanana Jeneralin'ny Fanjifana Governemantan'i Aragon.
Eoropa Afovoany & Atsinanana23 Mey 2017
Etazonia: Tetikasan-Tanora Tompotany Mandrakitra ny Tantarany Amin'ny Lahatsary
Amerika Avaratra22 Mey 2017
Ny lahatsary, hoan'ny vondrom-piarahamonina Navajo, no lasa lalana ifandraisan'ny tanora amin'ny razambeny sy ny tantaran'ny vahoakany amin'ny alalan'ny tantaran'ny Vehivavy Mavo.